May 2020 - Online Hartha
မမှန်ရင် လျှာအဖြတ်ခံရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ (2020) မှာဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်းများ
May 31, 2020 by Online Hartha
မမှန်ရင် လျှာအဖြတ်ခံရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ (2020) မှာဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်းများ (1) ဇန်နဝါရီ ဇန်နဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဟာ (၁) လပိုင်းအတွင်း ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး ရေများများသောက်ရင် သေးများများ ပေါက်တတ်တာကိုတော့ သတိထားပေးပါ …။ (2) ဖေဖော်ဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အသက်တွေ ကြီးကြီးလာတတ်ပြီး ၂၀၂၀ အတွင်းမှာတော့ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ဗိုက်မဆာတတ်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆောရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကတော့ ကားလမ်းကူးရင် ဘယ်ကြည့်၊ ညာကြည့်၊ ဘယ်ပြန်ကြည့်၊ ညာပြန်ကြည့် ပြီးရင်ကူးဆိုတဲ့ ယတြာလေးကို ပြုလုပ် ပေးနိုင်ပါတယ် …။ (3) မတ် … Read more
မြန်မာနိုင်ငံက ပရလောက က ပုံရိပ်တွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အိမ်( ရုပ်သံ) တကယ်ကြီးဗျ ၀င်ကြည့်ကြည့်ပါ…
မြန်မာနိုင်ငံက ပရလောက က ပုံရိပ်တွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အိမ်( ရုပ်သံ) တကယ်ကြီးဗျ ၀င်ကြည့်ကြည့်ပါ… ဒီဗွီယိုဖိုင်ကို ဂျင်းထည့်တဲ့ဗွီယိုဖိုင်ထင်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာကြည့်တယ် ကွန်ပြူတာနဲ့ဖန်တီးထားတာလည်းမဟုတ်ပါ။ ရိုးရိုးသာမန်ဖုန်းလေးနဲ့သာ ရိုက်ထားတာဖြစ်ပီး ကြမ်းပြင်မှာ လူလိုလို ဘာလိုလို လှုပ်ရှားနေတာကို မြင်ရပါတယ်။ အလင်းပြန်တာလည်း မဟုတ်ပါ။ ရေစိုကွက်ရှိလို့ ပုံရိပ်ထင်တာလည်းမဟုတ်။ တကယ်ပဲ ပရလောကက ပုံတွေလားမဝေခွဲတတ်တော့ဘူးဗျာ။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သေချာကြည့်ကြည့်ပီး တစ်ခုခုထူးခြားတာတွေ့ရင် မှတ်ချက်လေးရေးခဲ့ပါအုံးဗျာ။ပရလောကဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ် ဘာသာတိုင်းနီးပါမှာ ယုံကြည်မှုရှိနေကြပါတယ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ တွေ့ဖူးကြုံဖူးထားလို့သာ ယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ဒီဗွီယိုလေးဟာ ထူးခြားနေတာတော့ အမှန်ပါ။ #သာဂိ Unicode Version ပရလောက က ပုံရိပျတှေ ကွမျးပွငျပျေါမှာပျေါနတေဲ့အိမျ( ရုပျသံ) တကယျကွီးဗြ ဝငျကွညျ့ကွညျ့ပါ… ဒီဗှီယိုဖိုငျကို ဂငျြးထညျ့တဲ့ဗှီယိုဖိုငျထငျခဲ့ပါတယျ။ သခြောကွညျ့တယျ … Read more
ယခုနှစ်အတွက် တောင်သူလယ်သမားများ သတိပြုရန်…
တောင်သူလယ်သမားများသို့ အကြံပြုနှိုးဆော်ချက် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှ ခန့်မှန်းချက်များအရ ယခုနှစ်တွင် မုတ်သုန်လေဝင်ရောက်မှု နောက်ကျပြီး၊ မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းနိုင်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေရရှိမှုနည်းပါးနိုင်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။ သို့ပါ၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ၁။ ရေလိုအပ်ချက်နည်း၍ ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဈေးကွက်ဝင် သက်တမ်းတိုစပါးမျိုးများနှင့် ရေငတ်ဒဏ်ခံစပါးမျိုးများ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးကြရန်ဖြစ်ပါသည် ။ ၂။ အောက်ပါရေလိုအပ်ချက်လျော့နည်းသည့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ (က) ပျိုးသက်နုကောက်ကွက်ကြဲ(SRI)စနစ်၊ (ခ) တိုက်ရိုက်အစေ့ချ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်(အခြောက်/အစို)၊ (ဂ) Drum Seeder ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်၊ (ဃ) ကြဲခင်းစနစ်၊ ၃။ လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ – (က) လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်ပါက ပျိုးသက်နုကောက်ကွက်ကြဲ(SRI)စနစ်ကို အသုံးပြုရန်၊ ( ခ) လုပ်သားအင်အား အကန့်အသတ်ရှိပါက တိုက်ရိုက်အစေ့ချ … Read more
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူး​နဲ့ကို တိုင်မှာ….” “မိန်းမကလည်းကွာ….ငါက ချစ်လို့စတာကို…. လာပါ….ပြန်ရအောင်….” “မပြန်ဘူး….မပြန်ဘူး….ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ…. အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ….” ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ သူ့မိန်းမ ပေါက်ကြီး ပေါက်ကြီးဆိုတာက တစ်နှစ်တစ်ယောက် မှန်မှန်မွေးနေကျမို့ ပေါက်ကြီးလို့ခေါ်တာ အမြဲတမ်း လင်မယားတကျက်ကျက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာတောင် ပေါက်ကြီးတို့လင်မယားက တစ်နှစ်တစ်သားတော့ပုံမှန်ပေါက်နေကြ အခုလည်း ကလေးတစ်ယောက်က လက်မှာ တွဲလောင်းဆွဲလို့….ဗိုက်ထဲမှာက တစ်ယောက်နဲ့ အဲဒါလည်း ခုထိ အဖြေထုတ်လို့ မရသေးတဲ့ ပုစ္ဆာ…. “ရာအိမ်မှူးရေ….ရာအိမ်မှူးတပည့်နဲ့ကျွန်မကို ကွာရှင်းပေးပါ….” “ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲဟာ….နင်တို့လင်မယားကလည်းအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်မယ်လို့များ တွေးထားသလား…. ကဲ…ကဲ….ရုံးခန်းထဲလာခဲ့ကြ…. ” … Read more
(၉) နှစ်အရွယ် သမီးငယ်ကို ဖခင်၏တပည့်ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား…
(၉) နှစ်အရွယ် သမီးငယ်ကို ဖခင်၏တပည့်ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား…. မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် မိဘများမရှိခိုက် ၉ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်ကို ဖခင်၏တပည့်ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှုအား အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း ယနေ့မေ ၃၀ ရက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မေလ ၂၇ရက်နေ့ ည၉နာရီခန့်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နေ အသက် (၃၀)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ လုပ်ငန်းကိစ္စဖြင့် အပြင်သို့ထွက်သွားခဲ့သည်။ထိုသို့ ၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံ အပြင်သို့ထွက်သွားစဉ် ၎င်းတို့၏ ၉နှစ်အရွယ် သမီးငယ်မှာ နေအိမ်၌ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ည၉နာရီခွဲခန့်တွင် ၎င်းတို့က နေအိမ်သို့ပြန်လာစဉ် နေအိမ်ခြံဝင်းပေါက်ဝအရောက် နေအိမ်သို့ လှမ်းကြည့်ရာ သမီးငယ်မှာ နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်းမှကုန်းထပြီးဘောင်းဘီဝတ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး တစ်အိမ်တည်းနေ တပည့်ဖြစ်သူ မင်းခန့်ကို လှမ်းကြည့်ရာ နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း မတ်တပ်ရပ်နေသည်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဇနီးကသမီးငယ်ကိုနေအိမ်နှင့် (၃)ခြံအကျော် ရှိညီမဖြစ်သူ၏နေအိမ်သို့ခေါ်ယူကာအကျိုးအကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပြီး … Read more
ဝင်ငွေမရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက် တစ်ကောင်နဲ့တူတယ်…
ဝင်ငွေမရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်နဲ့တူတယ် ကောင်းကင်ကို ကြည့်ပြီးမျှော်လင့်နေရုံပဲ အမြင့်ဆိုတာ သူမအတွက်အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာ အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ် ဖက်တွယ်မက်မောနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အခန်းကျဉ်းလေးထဲက မီးလုံးလေးတစ်ခုနဲ့တူတယ် ဖွင့်ခြင်း ပိတ်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ့အလင်းဟာ ကန့်သတ်နယ်မြေတစ်ခုနဲ့ တကယ်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အများနည်းတူ တောင်ပံဖြန့် ပျံသန်းနိုင်ရမယ်… ဘ၀ဆိုတာ မျှော်လင့်အိပ်မက်နေရုံနဲ့ တင်းတိမ်မနေသင့်ဘူး မိသားစုအတွက် လွယ်အိတ်လိုလူမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့… မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ နေမင်းလို ကိုယ်ပိုင်အလင်းလဲရှိသင့်တယ် နေ့အခါလုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်ကို ကြဲဖြန့်ရင်း ညခင်းမှာလမင်းအတွက်လည်း မျှဝေထွန်းလင်းခွင့်ပေးရမယ်…။ ။ #Credit -လေးစားစွာဖြင့်-Yi Unicode Version ဝငျငှမေရှိတဲ့ မိနျးမတဈယောကျဟာ မပြံသနျးနိုငျတဲ့ ငှကျတဈကောငျနဲ့တူတယျ ကောငျးကငျကို ကွညျ့ပွီးမြှျောလငျ့နရေုံပဲ အမွငျ့ဆိုတာ သူမအတှကျအိပျမကျတဈခုမြှသာ အိမျထောငျရှငျ မိနျးမဆိုတဲ့ဂုဏျပုဒျ ဖကျတှယျမကျမောနတေဲ့ မိနျးမတဈယောကျဟာ အခနျးကဉျြးလေးထဲက … Read more
“မင်္ဂလာပါ” ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းစကားကြောင့် ရေခဲတိုက်အအေးခန်း သေမင်းလက်ကနေ သီသီကလေး လွတ်မြှောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (ဖြစ်ရပ်မှန်)
အမေရိကန်နိုင်ငံက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ… သားသတ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီးခါနီး အိမ်မပြန်ခင်လေးမှာ ခုတ်ထစ်ပြီး အမဲသားတွေကို မပုတ်သိုးအောင် တန်းစီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝင်ပေါက်သံတံခါးကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ်။ တံခါးကြီးဟာ အထဲကနေ ဖွင့်လို့ မရဘဲ အပြင်ကနေပဲ ဖွင့်လို့ရတယ်။ အအေးခန်းထဲက အပူချိန်ကလည်း ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်တဲ့အထိ အေးနေတယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံးလည်းအလင်းရောင်မရှိ မှောင်ပိန်းသွားတယ်။သူလည်း ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အသံကုန် အော်တယ်။ တံခါးကို လက်နဲ့ တဝန်းဝုန်း ထုပုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝင်ပေါက်တံခါးဟာ သံထုထည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ အထူကြီး လုပ်ထားတာမို့ အပြင်က လူတွေ မကြားနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီး အလုပ်ဆင်းချိန်မို့ အလုပ်သမားအားလုံးနီးပါးလည်း အိမ်ပြန်သွားကြပြီ။ သူလည်း တံခါးကို ထုလိုက်၊ အော်ခေါ်လိုက်နဲ့ တစ်နှစ်ရီကြာတော့ လက်တွေနာ၊ အသံကုန် မောပန်းလာလို့ အအေးခန်းအတွင်းနံရံကို … Read more
ရေကြီးပြီး ကြောက်စရာ မိကျောင်းကြီးတစ်ကောင် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်အထိ တက်လာတဲ့ဗွီယိုဖိုင် အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ (ရုပ်သံ)
ရေကြီးပြီး မိကျောင်းကြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်အထိ တက်လာတဲ့ဗွီယိုဖိုင် အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ ရေဘေးအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Karnaraka ပြည်နယ်မှာ ဒုက္ခတွေကြားထဲကပဲ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် နေအိမ်တွေဟာ ရေထဲစုန်းစုန်မြုပ်ကုန်ပြီး အိမ်ခေါင်မိုေးတွကိုသာ မြင်ရတော့တဲ့ အခြေအနေပါ…၏ နစ်မြုပ်သွားတဲ့ နေအိမ်တစ်လုံးရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာတော့ မိကျောင်းကြီးတစ်ကောင် တက်လာတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရပီး ဒီမြင်ကွင်းကို အစအဆုံးမှတ်တမ်း ယူရိုက်ကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗွီယိုဖိုင်ကိုတော့ လူအများအပြားဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေတာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်… ရေစကြီးလို့ ရပ်ကွက်တေ လမ်းတွေထဲမှာ ရေတေစတင်ဝင်ရောက်တဲ့ နေ့တွေကတည်းက မိကျောင်းကြီးဟာ လူနေအိမ်ကြားတွေထဲကို ရေစီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာ ခဲ့တာဖြစ်ပီး ခွေးတေကို ဖမ်းယူသတ်ဖြတ်စားသောက်ဖို့ ကြိုစားနေတာကို ဗွီယိုဖိုင်မှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်….။ ကံကောင်းတာကတော့ အကိုက်ခံရတဲ့ခွေးလေးဟာ ခုန်ထွက်ပြေးခဲ့လို့ အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ရက်တွေ … Read more
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရဲ့စိန်ဖူးတော်ပါ မြင်တာနဲ့ချက်ချင်း ရှဲလိုက်ပါ သင်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်…
ရွှေတိဂုံစေတီရဲ့စိန်ဖူးတော်ပါ မြင်တာနဲ့ချက်ချင်း ရှဲလိုက်ပါ … သင်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ် 🙏🙏🙏ကပ်ရောဂါကြီးဘေးမှလည်း ကင်းဝေးကြပါစေ…. (၇)ရက်သားသမီးများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ… မင်္ဂလသုတ်တော် ၁။ ယံ မင်ျဂလံ ဒှါဒသဟိ၊ စိန်တယိံသု သဒဝေကာ၊ သောတ်ထာနံ နာဓိဂစ်ဆန်တိ၊ အဋ်ဌတ်တိံ သဉ်စ မင်ျဂလံ။ ၂။ ဒသေိတံ ဒဝေဒဝေနေ၊ သဗ်ဗပါပဝိနာသနံ။ သဗ်ဗလောက ဟိတတ်ထာယ၊ မင်ျဂလံ တံ ပဏာမ ဟေ။ ၃။ ဧဝံ မေ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတ်ထိယံ၊ ဝိဟရတိ ဇတေဝနေ၊ အနာထပိဏ်ဍိကဿ အာရာမေ။ အထခေါ အညတရာ ဒဝေတာ အဘိက်ကန်တာယ ရတ်တိယာ အဘိက်ကန်တ ဝဏ်ဏာ ကဝေလကပ်ပံ ဇတေဝနံ ဩဘာသတှော … Read more
လက်​ဝါးပြင်​​ပေါ်က ထီ​ပေါက်​ကိန်းနှင့် ချမ်းသာခြင်း အမှတ်​အသားများ
“လက်​ဝါးပြင်​​ပေါ်က ထီ​ပေါက်​ကိန်းနှင့် ချမ်းသာခြင်း အမှတ်​အသားများ” ကျွန်ုပ်​ဆီမှာ လက္ခဏာလာတွက်​တဲ့ လက္ခဏာကြည့်​ပရိသတ်​ အ​တော်​များများ ​မေးတတ်​တဲ့အ​ကြောင်းအရာ​လေးပါ ပို့စ်မှာတင်​ဖို့ လုပ်​​နေတာလဲကြာပါပြီ၊ လက္ခ​ဏာကြည့်​သူများ​နေတာနဲ့ မတင်​ဖြစ်​တာပါ၊ ဒီ​နေ့​တော့မအားတဲ့ကြားထဲက ကျွနု​ပ်​ရဲ့လက္ခဏာကြည့်​ပရိသတ်​​တွေ ဗဟုသုတရ​အောင်​ နဲ့မိမိတို့လက္ခဏာမှာကျွန်ုပ်​ပြထားတဲ့ အမှတ်​အသား​လေး​တွေပါမပါ တိုက်​ကြည့်​လိုက်​ပါဦး..ပါလာရင်​​တော့ ကျွန်ုပ်​နဲ့အမြန်​ဆုံးဆက်​သွယ်​ပြီး ထီ​ပေါက်​ကိန်းရှိတဲ့လနဲ့ဘယ်​နံပါတ်​​လေး​တွေ အကျိုး​ပေးလဲဆိုတာ တိုင်​ပင်​လိုက်​ကြရ​အောင်​ ထီ​ပေါက်​ပြီးချမ်းသာရင်​လဲ လက္ခဏာဆရာမင်းခန့်​ကိုမ​မေ့ကြပါနဲ့ဦးဗျာ ။ ၁။ တနင်္လာဂြိုလ်​ခုံ​ပေါ်ကတြိဂံ လက္ခဏာကြည့်​ပရိသတ်​ရဲ့လက်​သူကြွယ်​​အောက်​က တနင်္လာဂြိုလ်​ခုံ​ပေါ်မှာ တြိဂံအမှတ်​သား​လေးပါလာရင်​ လက္ခဏာရှင်​ဟာ အရာရာမှာအများနဲ့မတူပဲ တီထွင်​ကြံဆမှု​တွေကိုနည်းလမ်းသစ်​ရှာ​ဖွေရင်း​ငွေအစုလိုက်​ဝင်​ရကိန်းအမှတ်​ပါပဲ။ ၂။ အသက်​အရံလမ်း​ကြောင်း လက္ခဏာကြည့်​ပရိသတ်​ရဲ့လက်​ဝါးမှာအင်္ဂါလမ်း​ကြောင်း(သို့) အသက်​အရံလမ်း​ကြောင်း​လေး အရံပါလာမယ်​ဆိုရင်​ လက္ခဏာရှင်​ဟာ ဘဝရဲ့ပထမအရွယ်​မှာပဲ အချိန်​အနည်းငယ်​အတွင်း ​ငွေအစုလိုက်​ရတတ်​ပါတယ်​။ ၃။ လက်​​ကောက်​ဝတ်​​ပေါ်ကတြိဂံ လက္ခဏာကြည့်​ပရိသတ်​ရဲ့ လက်​ဝါး​အောက်​ လက်​​ကောက်​ဝတ်​​ပေါ်မှာတြိဂံအမှတ်​အသား​လေးပါလာရင်​​တော့ လက္ခဏာရှင်​ဟာ ထင်​မှတ်​မထားပဲ ​ငွေအစုလိုက်​ကြီးကြီးမားမားရကိန်းပါပဲ ထီဆုကြီး​ပေါက်​ကိန်းလဲဖြစ်​နိုင်​သလို အ​မွေရုတ်​တရက်​များများစားစား ရကိန်းလဲ​ပြောနိုင်​ပါတယ်​ တခြားမထင်​မှတ်​တဲ့အရာနဲ့လဲဝင်​လာနိုင်​တယ်​ … Read more